Mandehana miangona, miverimberina, orinasam-panjakana
Ny fivoahana ho an'ny besinimaro dia ny fivarotana fivarotana rakitra, izay natao tany am-piandohana, ho an'ireo mpikambana amin'ny ankapobeny. Mora sarotra ny dingana, manapaka be loatra ary manana tombony maro, mitondra ny orinasanao:
Manampy anao hampitombo ny orinasa haingana kokoa amin'ny fanomezana anao ny loharanom-bola fanampiny.
Manampy anao hisarihana sy hitazona ambony ny olona amin'ny karama ara-drariny (amin'ny alalan'ny safidy amin'ny tahiry).
Ampitomboy ny orinasa haingana kokoa noho ny fanintonana manam-pahefana mahay sy za-draharaha.
Atsangano haingana ny renivohitra ary tsy misy vidiny firy.
Mampitombo ny liquidity ho anao sy ny mpampiasa anao.
Manala ny renivohitra sy mamorona tahiry azo vidiana azo vidiana azo ampiasaina mba hahazoana orinasa hafa ary hamolavola orinasa matihanina amin'ny orinasa hafa.
Mampitombo ny tahan'ny fitomboana amin'ny fampitomboana ny fahaizanao hifaninana amin'ny fifanarahana lehibe.
Azonao haingana sy haingana ny lanjan'ny orinasa misy anao.
Mampiasa ny fampiasanao manokana amin'ny orinasa ianao amin'ny fanaovana azy ho sarobidy, ka hampitombo ny ROI anao manokana.
Ampitomboina ny toeran'ny orinasa ataonao mba hahafahanao manintona ny orinasa vaovao.
Raha efa manana orinasam-panjakana ianao dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny hasarobidin'ny orinasa sy ny tombom-barotra ary manampy anao hiaro ny vola amin'ny fitsarana.
Tadidio; Tsy ny fanangonam-bola fotsiny ihany. Izany koa dia ny hahazoana antoka fa
Ny orinasa dia mihazakazaka sy mitantana. Ny tale CEO dia miasa ho tombontsoan'ny
mpanana petrabola. Eritrereto tsara ny eritreritrao ary ho tsapany ny antony manosika anao ary maro kokoa ny olona ho voasarika amin'ny fikambanana misy anao. Ny fomba fijery maharitra no zava-dehibe, fa tsy ny fisintonana indray mandeha. Ilainao ny orinasam-panjakana azo antoka, ny drafitra raharaham-barotra ary ny olona mahay manatanteraka izany. Na any Etazonia ianao, Alemaina, Shina, Kanada, na any an-toerana, mitadiava fanampiana.
Inona no ilainao fanampiana?
Te-hampitombo ny varotrao ve ianao?
Mila mandany vola ve ianao?
Te-hahazo orinasa hafa ve ianao ary mila mahita kandidà tsara?
Mila drafitra fandraharahana tsara kokoa ve ianao?
Ahoana ny momba ny dokam-barotra sy ny varotra? Mila vonjy?
Mila rafitra mpanohana tsara sy lisitr'ireo olona mahay ve ianao?
Ahoana ny fiarovana amin'ny olona "fohy" ny tahirinao?
Te-hanao raharaham-barotra amin'ny orinasa S & P 500?
Te-haka ny anaranao ho any amin'ny vahoaka miaraka amin'ny lamaody mahomby?
Tianao ve ny miala amin'ireo taratasy mavokely ary miditra amin'ny fifanakalozana lehibe?
Ity no fomba hanombohana
Misy ny fifanarahana izay ahafahanao mandanjalanja ny dingan'ny "mandeha ho an'ny daholobe".
Visa, MasterCard, American Express ary Discover dia ekena ihany koa.
Ny dingana mety dia manome anao koa ny fidirana amin'ny $ signature $ 50,000 ao anatin'ny iray andro (miankina amin'ny fankatoavana ny mpindram-bola) ary,
Lozam-bola lehibe kokoa arakaraky ny vola sy ny volan'ny vola raha toa ka mihazakazaka ny asa
Amin'ny toe-javatra maro, afaka mandamina ny ventin-kapitalisma Venture izahay mba hamatsiana ny dingam-pifidianana ho an'ny daholobe, arakaraka ny fijerin'izy ireo ny tanjon'ny orinasa.
Raha vantany vao naka ny orinasa ianao dia misy ny ekipa mpanaraka rehetra izay nomaninay hampitombo ny fahombiazanareo. Misy ireo olona manana fifandraisana lava izay efa nampiasaintsika na nampiasa manokana ary nahomby tamin'ny orinasa hafa. Ity ny lisitry ny ampahany:
Ny mpikaroka momba ny aina izay mahafantatra ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny ambany indrindra.
Mpanao gazety manerantany amin'ny famatsiam-bola
Ireo izay hanampy anao hampivelatra ny fifandraisana amin'ny orinasa S & P 500
Efa niasa tamin'ny taona 100 izahay
Miankina amin'ny fanandramana. Ny dingam-bahoaka dia dingana goavana. Noho izany, te-hiantehitra amin'ireo izay manampy anao ianao. Zava-dehibe ny mahatsapa fa fantatr'izy ireo ny votoatin'ilay dingana amin'ny alalan'ny traikefa goavana. Ny ekipanay dia manasongadina ny fiasa ao anatin'ny fari-piainan'ny lalàna momba ny vola ary nanao làlana tsara ho an'ny fanolorana haingana sy mahomby.
Ireto misy tombontsoa sasany ho an'ny olona manapa-kevitra ny handeha public:
Mamotsotra ny renivohitra sy ny liquidity
Hamafiso ny hasarobidin'ny orinasa.
Mora kokoa ny manangana ny renivohitra raha manana orinasam-panjakana ianao.
Afaka mampiasa tahiry handoavana ny tolotra toy ny dokam-barotra, fampiroboroboana vokatra, ary ny hafa
serivisy sy ny tahan'ny orinasa hafa.
Mora kokoa ny mividy orinasa hafa - amin'ny fividianana ny orinasa amin'ny tahiry.
Vaovao momba ny Fihaonana ho an'ny besinimaro
Ny fanolorana fanolotra mivantana (DPO) dia mety manana tombony lehibe amin'ny IPO. Amin'ny IPO dia tsy maintsy manambara ny habetsahan'ny orinasa hivezivezena amin'ny alalan'ny fivarotana ampahany. Raha tsy natsangana io vola io, dia tsy vita ny fanatitra. Na izany aza, miaraka amin'ny DPO dia tsy misy ny fepetra mitovy ihany sy mbola betsaka kokoa ny flexibilité satria tsy voatery hanangona ny habetsaky renivola izay atolotray amin'ny fanatitra ianao tahaka ny tsy maintsy anananao amin'ny IPO.
Raha toa ka manomana na mieritreritra ny handeha am-piadanana ianao ary te hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny fizotry ny fisoratana SEC, anisan'izany ny fonosam-bahoaka na ny famerenana mivadika, dia fenoy ny endrika eo ankavanana ary misy olona iray hiady hevitra momba izany miaraka aminao. Afaka mahita ny habetsaky ny tadiavinao ianao ary rehefa maniry ny hanangona kapital. Anontanio ny fomba handehanana am-pahibemaso ary anontanio momba ny fifangaroan-kevitra. Ny fanampiana dia misy amin'ny mememandum manokana (PPM) ary koa
ny fahazoana renivola, kapitalisma, mpandraharaha, mpanamboatra orinasa ary ny fomba hakana ny orinasa. Misy ihany koa ny fampahalalana mikasika ny fomba hampiakarana ny renivola ho toy ny orinasam-panjakana ary ara-dalàna.
Rehefa vita ny asa rehetra, afaka mandeha any amin'ny orinasanao ny orinasa ary ho lasa orinasam-panjakana ny orinasanao. Maka anao amin'ny tànana ianao ary mandehandeha amin'ny làlan-tsambo manara-penitra amin'ny dingan'ny famokarana orinasam-panjakana. Ny mpiara-miasa amin'ny mpiasa matihanina dia afaka mitazona anao ihany koa momba ny fomba hanaovana fifampitifirana amin'ny orinasam-barotra ampiharina. Afaka mandeha amin'ny besinimaro amin'ny alalan'ny famoriam-bahoaka mivantana amin'ny orinasam-panjakana. Ny DPO, na izany aza, dia matetika no safidy tsara indrindra ho an'ny ankamaroan'ny olona.
Mandehana amin'ny besinimaro miaraka amin'ny fifampiraharahana tsara sy ny fifandraisana amin'ny fifandraisana
Ny fifandraisana amin'ny mpampiasa dia manana antony manosika, tombon-dàlana ara-dalàna, ary ny antony manosika ny fiadanana. Noho izany, ny orinasanay dia afaka manampy anao hifandray tsara amin'ny mpampiasa vola ary hampiroborobo ny tahiry. Tsy sahala amin'ireo orinasa tsy miankina, ny orinasam-panjakana iray dia afaka mamoaka fanolotra mivantana avy hatrany ho an'ireo mpikambana ao amin'ny vahoaka.
Amin'ny orinasam-panjakana, afaka manampy anareo handray andraikitra sy hanangona renivola izay ilain-dry zareo haingana sy ara-dalàna.
Afaka manampy anao hampiroborobo ny raharaham-barotra ho an'ny mpihaino bebe kokoa ianao noho ny hatramin'izay.
Azonao atao ny mividy tahiry ho an'ny dokam-barotra. Dia afaka mampiasa ity dokam-barotra maimaim-poana ity ianao ary ampiasao izany mba hahafahan'izao tontolo izao hahafantatra fa orinasam-panjakana ianao. Olona maro hafa no hahafantatra anao fa maro kokoa ny olona mividy anao. Izany dia hanampy anao amin'ny fikatsahana ny fananganana renivohitra satria ireo mpampiasa vola dia hahafantatra fa ny tahirinam-bolanao dia azo anaovana varotra.
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahazatra ny fomba hivoahana amin'ny besinimaro. Noho izany dia manao mora isika. Ireo sombiny toy ny fanatitra mivantana, fanolorana ampaham-bahoaka dia mahazatra fa vitsy no mahafantatra ny antsipiriany momba ny fomba handehanana any. Inona no atao hoe mpanao tsena? Ahoana no fomba tsara indrindra anaovana fiverimberenam-paosy? Raise capital? Mamolavola orinasam-panjakana? Ireo no fanontaniana novalianay ary ireo no tolotra azo omena aorian'ny fiantsoana anareo.
Ny iray amin'ireo dingana voalohany dia mameno ny taratasy fangatahana S-1 ary mametraka izany amin'ny
Securities and Exchange Commission (SEC). Raha vantany vao ankatoavin'izy ireo ny fangatahana, ny antontan-taratasy dia nalefa any amin'ny FINRA, ny Manampahefana ara-dalàna momba ny fananganana orinasa. Ny laharam-pahamehana sy ny fepetra amin'ny fomba amam-panao IPO sy DPO dia atao amin'ny fomba matihanina sy ny fomba fiasan'ny fialan-tsasatra iombonana, ny fehezanteny 15c211 ary ny famolavolana 8-K. EDGAR, izay mijoro ho an'ny Electronic Data Gathering, Analysis, ary Retrieval, dia vita tanteraka mba hamoronana ny orinasam-panjakana, ny fiverimberenan'ny fiverimberenana ary ny fanombohana ny kapitalin'ny orinasa na ny fitomboan'ny vola.
Araka ny voalazanay tato amin'ity lahatsoratra ity, matetika ny DPO (Direct Public Offering) ny fomba tiany indrindra. Mifameno ary afaka manome anao fanazavana maimaim-poana momba ity lohahevitra ity ary koa ny fomba hanaovana fifampitifirana amin'ny orinasam-panjakana. Noho izany, afaka mianatra ny fomba hitondrana ny orinasanao ianao fa tsy ny fandaniana nentim-paharazana. Ankoatra izany, afaka mahazo toro-hevitra momba ny fomba hitondrana ny orinasa ianao ary nahoana no mora kokoa ny manangana ny renivohitra amin'ny fampiasana orinasam-panjakana raha manohitra ny olon-tsotra.
Mampiroborobo ny sarivonganao - Tsy misy tsara kokoa noho ny tantara tsara
Ny IPO tsara dia ny mivarotra ny tantaranao. Amin'ny ankapobeny, tsara ny fivarotana tsara
tantara, tsy hanaiky ve ianao? Ny iray amin'ireo dingana voalohany dia ny miasa andro roa eo amin'ny tantara. Manaova izany amin'ny olon-kafa. Aorian'izay, raha tokony handrotsa-danja amin'ireo hevitra efa taloha ianao, dia manavao tsy tapaka ny tantaranao. Mividy fihetseham-po ny olona ary manamarina ny fanapahan-keviny amin'ny lojika. Ataovy azo antoka ny hampiditra ny fomba fijery lojika izay miteraka fihetseham-po sy fihetseham-po mampihetsi-po izay mampihetsika ny molekiolan'ny investor. Tantarao tantara iray izay ahafahan'ny olona miresaka.
Tena tantara tokana ihany ny milaza amin'ny vondron'olona mpampiasa IPO: Ahoana no hataon'ny orinasa hanome azy ireo vola bebe kokoa noho ny tovolahy manaraka? Ny ankamaroan'ny manampahefana ao amin'ny orinasa sy ny mpikambana ao amin'ny birao dia mampiasa ny fanomezana ny mpanjifa. Saingy, tadidio fa ny zava-dehibe ho an'ny mpanjifa hahafantatra sy ny zavatra tian'ny mpampiasa ho fantatra dia matetika tsy mitovy. Noho izany, ankoatra ny miresaka momba ny vokatrao sy ny zavatra azonao atao amin'izy ireo, rehefa miresaka amin'ny mpampiasa vola, dia resaho amin'ny ROI.
Manoratra ny tantara ianao
Afaka mahazo fanampiana ianao, fa amin'ny farany dia tsy maintsy hosoratana ny tantara. Izany no asan'ny CEO na ny CFO. Mba hamerenana, mividy fihetseham-po ny olona ary manamarina ny fividianana amin'ny lojika. Noho izany, raha toa ka misy dikany ny tantara ary avy ao am-ponao, dia misy dikany lalina sy tena misy aminao, ny mpihaino anao dia hahatsapa izany, afaka mihetsika ara-pihetseham-po ary afaka manamarina ny fanapahan-keviny.
Niara-niasa tamin'ny orinasa roa izay samy tao amin'ny orinasa avo-teknika izahay. Ny iray tamin'ireo CEO dia nandoro ny menaka mamatonalina izay manomana filazana mendrika sy feno hatsaram-panahy. Ny tale jeneralin'ny orinasa iray hafa dia nanao ny fampahafantarana ny mpandraharaha ara-barotra. Ny fanatitra dia natolotra sy ny vidiny isan'andro. Ny voalohany, izay nahitana ny tolo-kevitry ny CEO tao anatin'ilay fampisehoana, dia nandeha lavitra noho ny vidin'ny vidiny. Ny faharoa dia teo amin'ny farany ambany. Misy antony tsara amin'izany.
Raha hitanao ny fanandramana voalohany amin'ny fandaharana "American Idol", izay hitan'ny mpitsara iray mpihira singa iray hafa, dia hitanao fa maharikoriko i Simon Cowell rehefa mandeha ny kandidà amin'ny fitazoman-drahavavy iray na mampiasa gadona hafa. Mitady talenta izy ireo fa tsy hipoitra.
Toy izany koa ny mpampiasa vola. Mety mahita tolo-drakitra dimy hatramin'ny folo izy ireo isanandro. Nahita azy rehetra izany. Fotoana vetivety dia lasa manjavozavo sy misalasala izy ireo ary mila manavaka ireo vatokiloka tsy misy vidiny mba hahitana ireo volokolo vitsivitsy vita amin'ny volamena. Tsy misy fanampiana ny fonosana. Ny fanalahidy dia ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny famelabelaranao. Izay no handraisan'ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra. Ny zava-dehibe indrindra dia ny 10-15 minitra farany mandritra ny fanontaniana sy valiny. Ny mpampiasa dia maniry ny hahita ny fihazakazahanao rehefa sarotra ny hevitrao.
Ity misy fanontaniana iray napetraky ny tale CEO rehetra teny an-dàlana: "Inona no lehibe indrindra aminao?
fanamby? "Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe:" Inona no mitazona anao amin'ny alina? "Ny fomba tsara indrindra hamalian-teny dia ny miaiky ny ahiahinao ary mamela ny mpanatrika hahafantatra izay ataonao hamaha ny olana.
Ny famelabelaranao dia matetika 45 minitra. Izay ihany no anananareo. Ajanony àry ny baomba ary omeo azy ireo ny fitifiranao tsara indrindra mandritra ny telo minitra voalohany. Izany dia hahatonga azy ireo haniry hipetraka sy hahatsikaritra mandritra ny 42 manaraka. Nahoana ianao no tsy mitovy?
Ity misy ohatra tsara. Ny tale jeneralin'ny orinasa iray namorona rafitra fantsom-pirahalahiana dia niresaka tamin'ny vondron'olona mpampiasa mety toy izao: "Avelao aho hanomboka ny famelabelarany amin'ny fanontaniana, Firy ny olona eto androany no nanadio ny tany?" Ny tsirairay dia nanangana ny tanany. "Firy aminareo no tia manao izany?" Tsy nisy tanana nitsangana. "Toa olona maro an-tapitrisany eran-tany no tsy tia manadio ny efitranony. Ny ABC Robotics dia manana vokatra hamahana izany olana izany. "
Azontsika atao ny manampy anao amin'ny farany momba ny volavolan-tsolika IPO, famerenam-bidy, Fitsipika 15c211, Fitsipika D, mandeha any amin'ny tranombokim-panjakana sy ny vahoaka. Ankoatra izany, mifandray aminay amin'ny fampahalalana momba ny Private Placements Memorandum (PPM), fitsipika 504, Rule 506, manangana ny renivohitra sy ny fanombohana ny kapitalina, fiarovana amin'ny ady, ary koa ny fananganana orinasa vaovao any Etazonia sy any ivelany.
Misy ny zavakanto. Ny fananganana kapital dia mety ho labiera. Manana ny sari-tany izahay. Fantaro izay mitranga rehefa mivoaka ny orinasa iray ary jereo ny fomba hanampiany anao.
Hianatra bebe kokoa momba ny fivoaran'ny orinasa iray ianao ary hahatsapa ho mahazo aina amin'ny fanapaha-kevitra momba ny fomba mety aminao. Noho izany, raha mila fampahalalana bebe kokoa sy famaritana maromaro ianao, ary koa dingana handaminana ny fifampitifirana, famoriam-bahoaka na fanolorana ampaham-bahoaka (DPO), antsoy ny isa eo an-tampon'ity pejy ity. Mazava ho azy, tsy misy ny fampahalalana voarakitra ato anatin'ity toro-hevitra ity fa tokony hodinihina ara-dalàna, hetra na torohevitra hafa. Raha ilaina izany, dia tokony hikaroka ny serivisy nomen'ny mpisolovava sy / na ny kaonty.
Rehefa vonona ny handeha malalaka ianao dia mifandraisa aminay. Niasa hatramin'ny 1906 izahay ary fantatra eran'izao tontolo izao amin'ny maha-mpitarika eo amin'ny sehatry ny orinasa ary mandeha ho an'ny daholobe.